HILARION RARISON : « TOKONY HIOMANA AMIN’NY FITSENANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ISIKA » – MyDago.com aime Madagascar
Ny filoha Ravalomanana Marc hoy ny Ct Hilarion Rarison androany teny amin’ny Magro Behoririka dia kinga amin’ny fanaovana politika, ary homba azy na ny Sadc, na ny vondrona Afrikana. Fandresena lehibe ho antsika hoy izy ireny fanapahankevitry ny vondrona Afrikana ireny. Araka ny lalàna dia efa tokony ho eto ny filoha Ravalomanana Marc amin’ny 08 febroary izao. Noho izany hoy ity olomboantendry ity dia tsy tokony hiroaroa saina isika fa efa tokony hiomana amin’ny fitsenana an’i Dada. Tsy ekentsika hoy izy ny teti-dratsin’ny frantsay hoe ampodiana mangina i Dada. Raha demokraty marina ianareo vondrona Eoropeana,Vondrona Afrikana, ny Sadc dia avelao i zy ho tonga ary tsenaina amin’ny fomba makotroka. Fepetra roa hoy Hilarion no takianay zanak’i Dada. Ny voalohany dia raha hanao fifidianana dia tsy maintsy tonga alohan’ny 08 febroary ny filoha Ravalomanana Marc. Ny Faharoa dia raha tsy hanao fifidianana dia alao Rajoelina alohan’ny 08 May. Ho an’ny filoha vaovao hitarika ny Ffkm Odon Razanakolona dia nambaran’i Hilarion fa mihodina ny tantara ary ny lasa tsy fanadino. Tamin’ny taona 2009 hoy izy io ray amandreny io no nitondra ny Ffkm. Miangavy anao, avereno ny teninao tamin’izany manao hoe avelao halalaka ny fanehoankevitra, aoka izay ny fisamborana. Namafisiny fa ny filoha Ravalomanana Marc hody ato ato dia ny miaramilan’ny Sadc no hanatitra azy. Noho izany hoy izy dia miandry ny toromariky Dada isika.
RALAISEHENO GUY MAXIME :TSY MAINTSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY TANTERAHINA ATO ATO IZANY
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 janvier 2013 29 janvier 2013 Catégories Politique
9 pensées sur “HILARION RARISON : « TOKONY HIOMANA AMIN’NY FITSENANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ISIKA »”
29 janvier 2013 à 19 h 03 min
fa ngah misy misoratra ao fa apitso na omaly ilay fodiana !aza mandihy tsy afa tavony fa hilarant e!
SAO IZANY NO HATAO HOE MAMAHAN DALITRA.
tena hilarant zany! manonofy isika zany an!fa ngah afaka manao an,izany ny sadika?ary tsy hitanareo ngah fa miara milalao isanandro ny marasila fratsay sy gasy?tsy mahalala ny renimalala marina ry hilarant zany
mpandinika dit :
29 janvier 2013 à 21 h 04 min
io indray ilay manome daty, mampanantena angidina, impiry izay, manome daty mandainga foana. Rahoviana marina i Dada no ho tonga eh. Tokony tsy hanome daty intsony fa mampanantena tsy misy an’i Magro lava izao. Mandainga, mpandainga lava izao. Aoka mba ho matotra amin’izay fa efa ho dimy taona izao no hitanin’andro ao Magro ny zanak’i Dada. Voafitaka lava amin’ny date hahatongavan’i Dada. Misaotra tompoko
29 janvier 2013 à 22 h 08 min
iITONY ENTINA ENY @ AMASSADE R I HANITRA SY MAMY O!!!!
mijoro dit :
29 janvier 2013 à 22 h 24 min
Ka na SADC na U.Africaine anie ka efa voavidiny renindozatra daholo e!
– Indrisy efa noterena ny filohantsika hanaiky fampitahorana samihafa, toy ny tsy milatsaka ho fidina fa ….ary mety afaka hody ihany fa….
– Rehefa tsy misy loha hitarika dia mora ravana ny vahoaka ambony taritina e!
– « Paris sur Ikopa » hoy aho no hitantana ny malagasy ary mbola ho hovany frantsay koa aza ny anarana fiantso ny vahoaka raha izao no mitohy.
Dia tsy ho ela ny sarimihetsika MADAGASCAR 4…5.
– Izay vao tena « very vakana » araky ny hiran’i R. Raelison, ho an’izay mahatadidy io
– Ka dia « Hitsako tsy misy eo », araky ny hira ihany e! AEOM moa sa iza fa tsy tadidiko.
Sa mbola misy toko sy andininy ho havadibadika indray ?
Tairo re ny fanampina tosika ny hetsiky ireo nasahy nijoro teo anoloany masovohy frantsay e!
29 janvier 2013 à 23 h 15 min
Aiza ô…..???efa mifoha daholo ve eeeeee????
misaotra fa tafita tsara ilay hafatra @ alalan’ilay sary Michel a!!
Ity fanomezana daty ity dia fanaovana toetra tsy zaka an’i Magro raha misy tsy mahalala,
reefa tė ahazo tehaka be koa anefa dia io no lazaina, dia ao koa ny VOAVIDY TSOTRA
IZAO E!!!@’izay leo monina ny olona dia tsy tonga eo intsony, i dada aza efa niteny fa « IZY
IHANY NO MANOME NY DATY AHATONGAVANY » koa mbola LINGITRA IHANY NY SASANY.
Tsy musy afaka mampitahotra an’i dada izany eo fa firenena matanjaka anie no miaraka aminy e!!
politika avolentan’i dada io fa aza matahotra ry MIjoro a!!io anie no mampangovitra an’i renikely eo
fa sy iona e!!fantany fa mifono zava-dalina be io ary ny vahoaka tsy HANAIKY tsy hilatsaka izany
dada fa inona o nimatimatesana izay ela izay no tsy hilatsaka ahoana ???tsy musy manaoky izany eo.
Vavan'i pelozy dit :
Ary matetika tsy mety misokatra @ mobile (mba takatry ny madinika tsy manana ordi!) ty takelaka ty fa « mémoire pleine »?
30 janvier 2013 à 11 h 22 min
Fandresena ho antsika tokoa ireny fanapahankevitry ny UA ireny raha ampiharina!Aza miandry fotsiny eo an kianja eo rangahy fa tarito ny zanak’i dada ho eny am foiben’ny sadc hi revendiquer ny fampiharana manontolo ny fdr izao d izao ,fa tsy miandry mahazo fotsiny ao anaty magro ao!nisy nanketsy am ambassade de france ny olona dia mba taiza ianareo?
Précédent Article précédent : PRO RAVALOMANANA : TSY EKENA NY FANJANAHANA AMIN’NY ENDRINY VAOVAO
Suivant Article suivant : PRO RAVALOMANANA : NISAOTRA NY AMERIKANA